စပိန်အသံလွှင့်ဌာန၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ Lavinia သည် LiveU သို့ပြောင်းလဲသွားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဦးဆောင်စပိန်အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများပေးသူ Lavinia LiveU မှနှစ်မြောက်မွေးနေ့
စပိန်-based Lavinia မကြာသေးမီကယင်း၏ newsgathering နည်းပညာများ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ဖို့နှင့်သတင်းစစ်ဆင်ရေးအပေါ်ထားရှိသည့်တိုးမြှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုင်တွယ်ရန် LiveU လှည့်ထားသည်။ Lavinia (၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ, ဘရပ်ဆဲလ်အခြေစိုက်အဲလစ်ထုတ်လုပ်မှု, တဆင့်) စပိန်နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အများအပြားထုတ်လွှင့်ရန်ပြည့်စုံ Outsourcing newsgathering န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ Lavinia ထိုကဲ့သို့သော Mediaset Espana, ခုနစျပါးအခမဲ့-to-air ရုပ်သံလိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တစ်နိုင်ငံလုံးထုတ်လွှင့်ဖို့အဖြစ်များစွာသောအခြားဒေသဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ဖို့စပိန်နိုင်ငံန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Lavinia လည်းမကြာသေးမီကကမ္ဘာတဝှမ်းဖဲ့သတင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဌာနကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အသစ်က IP ကိုနည်းပညာအားသာချက်ကိုယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ Lavinia င်း၏တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုနိုင် LiveU လှည့်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်စပိန် LiveU ရဲ့ရေရှည်လက်တွဲဖော်, ပန်းခြံ7ကကြီးကြပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Lavinia တစ်နိုင်ငံလုံး key ကိုမြို့ကြီးများရှိရုံးခန်းများနှင့်အတူ၎င်း၏နေအိမ်တိုင်းပြည်စပိန်အနှံ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်, ထိုသို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောဘေဂျင်း, ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခြားမြို့များအဆောက်အဦ, အဆိုပါကုမ္ပဏီဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ကျယ်ပြန့်များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်ရှိပါတယ် ။
Xavier က de Pol, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်န်ဆောင်မှုများတိုင်း, Lavinia ကျနော်တို့က၎င်း၏မွေးရာပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, မိုဘိုင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုနှင့်အတူ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုကိုလွှမ်းခြုံများအတွက်ဆယ်လူလာ Bond နည်းပညာအပေါ် ပို. ပို. မှီခိုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, အဲဒါကအလွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရဲ့ "လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ LiveU ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏တုန့်ပြန်နှင့်ယူနစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့၏အရည်အသွေးနှစ်ခုစလုံးနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာပန်းခြံ7နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကိုချိုးဖောက်သတင်းအဘို့ထိုသူတို့သုံးပါနှင့်စပိန်၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခြေခံအတွက်စီစဉ်ထားဖြစ်ရပ်များ, ကိုဖုံးလွှမ်းရန်။ "
Gonzaga Avello, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ, ပန်းခြံ 7, Lavinia ပွဲတစ်ပွဲဒီကဏ္ဍအတွက်စပိန်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ forward-စဉ်းစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လျင်မြန်စွာ LiveU ကြောင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးက IP-based အနာဂတ်ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားလျက်ရှိသည် "ဟုပြောသည်။ "
ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond သတင်း newsgathering လှံ & Arrows အားကစား က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-10-03
ယခင်: အဆိုပါ SMPTE 2018 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲမှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
နောက်တစ်ခု: Magewell Introduces နယူး dual-Channel ကို 4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ-Simplified Loop-မှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ Card ကို Capture